TRF ee Saxaafadda 2020 - Abaalka 'Reward Foundation Love, Jinsiga & Internetka'
Bogga ugu weyn TRF ee Saxaafadda 2020
Saxafiyiinta ayaa daahfuray The Reward Foundation. Waxay ku faafinayaan ereyga ku saabsan shaqadeena oo ay ka mid yihiin: casharradeena ku saabsan halista ka timaadda sigaar-cabista muddada-dheer; ku baaqida wax ku ool ah, barashada jinsiga ee maskaxda ku haya iskuullada oo dhan; ubaahantahay tababarida bixiyeyaasha xanaanada caafimaadka ee NHS ee ku saabsan qabatinka sawirada qaawan iyo waxqabadkeena cilmi ku saabsan dhibaatooyinka galmada ee sababa galmada iyo khalkhalka dabeecadaha galmada ee qasabka ah. Boggan wuxuu diiwaangeliyaa muuqaalkeenna wargeysyada iyo khadka tooska ah. Waxaan rajeyneynaa in aan soo dhejino sheekooyin badan oo dheeraad ah sida 2020 ay u socoto.
U wac kaadhka amaahda ee meelaha galmada lagu isticmaalo
Waxaa qoray Megha Mohan, Jinsiga iyo wariyaha aqoonsiga ee BBC News, Jimcaha 8 Meey 2020
Shirkadaha waaweyn ee kaararka amaahdu waa inay xayiraan lacag bixinta bogagga qaawan. Tani waa aragtida koox ololeyaal caalami ah iyo kooxaha u ololeeya oo sheegaya inay ka shaqeynayaan wax ka qabashada dhiigmiiradka galmada.
Warqad ay aragtay BBC-da, ayna saxiixeen in kabadan 10 u ololeeyayaasha iyo kooxaha u ololeeya, ayaa sheegaysa in boggaga galmada ay ka "kacsi gaystaan ​​rabshadaha galmada, sinada, iyo cunsuriyada" ayna sii daayaan waxyaabaha ku jira xadgudubka galmada caruurta iyo ka ganacsiga galmada.
Mid ka mid ah bogagga ugu horreeya, Pornhub, ayaa yiri "warqaddu [ma ahayn] mid xaqiiqda oo keliya khaldan laakiin sidoo kale si ula kac ah u marin habaabinaysa."
Mastercard wuxuu BBC-da u sheegay inay baarayaan sheegashooyinka ka soo baxay warqadda ee ku saabsan goobaha sawir-gacmeedka "ayna joojin doonaan xiriirka ay la leeyihiin shabakadeena" haddii hawl sharci-darro ah oo kaarka leh la xaqiijiyo
10 shirkadood oo kaararka deynta ah
Warqadda waxaa loo diray 10 shirkadood oo kaararka kaararka deynta ah, oo ay ku jiraan "Big Three", Visa, MasterCard iyo American Express. Saxiixayaasha ka socda dalal ay ka mid yihiin UK, US, India, Uganda iyo Australia ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo lacagaha la siinayo baraha anshax darrada leh.
Saxiixayaasha warqada waxaa ka mid ah kooxda aan macaash doonka aheyn ee muxaafidka ah ee Xarunta Qaranka ee Ka-faa'iideysiga Jinsiga (NCOSE) ee Mareykanka, iyo dhowr kale oo iimaan leh ama kooxaha u dooda xuquuqda haweenka iyo caruurta.
Warqaddu waxay sheegaysaa inaysan macquul ahayn in "la xukumo ama la xaqiijiyo oggolaanshaha fiidiyow kasta oo ka jira boggooda, iskaba daa fiidiyoowga websaydhka tooska ah" oo "si dabiici ah uga dhigaya boggaga internetka ee filimada qaawan bartilmaameed u ah kuwa ka ganacsada galmada, kuwa ku xadgudba carruurta, iyo kuwa kale ee wadaagaya fiidiyowyo aan sharci ahayn oo aan raalli laga ahayn".
"Waxaan aragnay qaylo sii kordheysa oo caalami ah oo ku saabsan waxyeelada filimada qaawan ee la wadaagayo dhowr siyaabood bilihii la soo dhaafay," ayay tiri Haley McNamara, oo ah agaasimaha xarunta caalamiga ee fadhigeedu yahay UK ee ku-takrifalka galmada, garabka caalamiga ah ee NCOSE iyo saxeexa warqadda.
"Annaga oo ah u doodaha carruurta ee caalamiga ah iyo ka-hortagga galmoodka ka-faa'iideysiga jinsiga waxaan ka dalbaneynaa hay'adaha maaliyadeed inay si adag u falanqeeyaan kaalintooda taageerada ee ku aaddan wax-soo-saarka qaawan, iyo inay xiriirka u jaraan," ayay u sheegtay BBC
Warbixin ku saabsan rabitaanka cuntada fiidiyowga ee xadgudubka carruurta ee bogagga qaawan waxaa lagu daabacay bishii Abriil Sanduuqa Ilaalinta Carruurta Hindiya (ICPF). Hay'addu waxay sheegtay in ay si aad ah u kordheen baahida loo qabo baaritaanka xadgudubyada carruurta ee Hindiya, gaar ahaan tan iyo markii la xiray coronavirus.
La socoshada qaawan ee internetka
Pornhub, barta ugu caansan ee qulqulka qulqulka-caanka ah, ayaa lagu magacaabay warqadda. Sanadka 2019, waxay diiwaan gelisay inka badan 42 bilyan oo booqasho, oo u dhiganta 115 milyan maalintii.
Pornhub ayaa la kormeeray sanadkii hore markii mid ka mid ah bixiyeyaasheeda - Gabdhaha Do Porn - ay noqotay mowduuca baaritaanka FBI.
FBI-da ayaa ku soo oogtay afar qof oo u shaqeynayay shirkadda wax soo saarka ee abuurtay kanaalka iskuxirka haweenka si ay u sameeyaan filimaan qaawan oo been abuur ah. Pornhub waxa ay ka saartay kanaalka 'Girl Do Porn' isla markaaba eedeymaha lagu soo oogay.
Iyadoo faallo siinaysa BBC bishii Febraayo ee la xiriirta kiiskan, Pornhub waxay sheegtay in siyaasaddeeda ay ahayd "in meesha laga saaro waxyaabaha aan la oggoleyn isla marka aan ogaano, taas oo ah sida saxda ah wixii aan ku sameynay kiiskan".
Bishii Oktoobar ee sanadkii hore nin 30 jir ah oo reer Florida ah, Christopher Johnson, ayaa la soo taagay dacwado la xiriira inuu si xun ula dhaqmay 15 sano jir. Fiidiyowyo ku saabsan weerarka la sheegay in lagu dhejiyay Pornhub.
Isla qoraalkaas oo ay u dirtay BBC-da bishii Febraayo, Pornhub waxay ku sheegtay in siyaasaddeeda ay ahayd "in meesha laga saaro waxyaabaha aan la oggoleyn sida ugu dhakhsaha badan ee aan uga warqabno, taas oo ah sida saxda ah wixii aan ku sameynay kiiskan".
Hay'adda Internet Watch Foundation, oo ah hay'ad Ingiriis ah oo ku takhasustay la socoshada xadgudubka galmada ee internetka - gaar ahaan carruurta - ayaa BBC u xaqiijisay inay heleen 118 dhacdo oo ku saabsan xadgudubyada galmada carruurta iyo fiidiyowyada kufsiga ee carruurta ee loo yaqaan 'Pornhub' intii u dhaxeysay 2017 iyo 2019. Jirku wuxuu ku shaqeeyaa iskaashi booliska adduunka iyo dawladaha si loo calaamadiyo waxyaabaha sharci darrada ah.
Hadal uu siiyay BBC, afhayeen u hadlay Pornhub wuxuu ku sheegay inay "ballan adag ka qaadanayaan ciribtirka iyo la dagaallanka wax kasta oo sharci darro ah, oo ay ku jiraan waxyaabaha aan la isku raacsaneyn iyo kuwa da'da ka hooseeya. Soo jeedin kasta haddii kale waa mid si sax ah oo xaqiiqa ah u khaldan tahay. ”
Nidaamkeenna dhexdhexaadinta waxyaabaha ayaa ku jira safka hore ee warshadaha, iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyad hoggaamineed iyo farsamooyin dhexdhexaad ah oo abuuraya hanaan dhammaystiran oo lagu ogaanayo laguna tirtirayo barxadda wixii sharci darro ah.
Pornhub ayaa sheegtay in warqadda ay soo direen ururo "kuwaasoo isku dayaya inay booliska u jiheeyaan galmada iyo waxqabadka - xaqiiqda kaliya ma ahan khalad laakiin sidoo kale si ula kac ah loo marin habaabinayo."
American Express waxay leedahay siyaasad caalami ah oo jirta tan iyo 2000. Siyaasaddu waxay leedahay waxay mamnuucaysaa macaamil ganacsi ee waxyaabaha qaangaarka ah ee dijitaalka ah halkaas oo halista loo arko inay si aan caadi ahayn u sarreyso, iyadoo gebi ahaanba la mamnuucay sawir-gacmeedka qaawan ee internetka. Wareysi uu siiyay shabakada Smartmoney sanadkii 2011, afhayeen u hadlay American Express waqtigaas wuxuu yiri tani waxay ugu wacan tahay heerarka sare ee khilaafaadka, iyo ilaalin dheeri ah oo ku aadan la dagaalanka filimada xun ee caruurta.
Hase yeeshe, ururadu sidoo kale waxay u direen waraaqaha American Express, maxaa yeelay waxay yiraahdaan ikhtiyaarrada lacag-bixinta ee American Express ayaa lagu bixiyay bogagga sawir-gacmeedka - oo ay ku jiraan mid ku takhasusay waxyaabaha ku saabsan da'yarta.
Af hayeen u hadlay American Express ayaa u sheegay BBC in iyadoo siyaasada adduunka wali taagan tahay, American Express waxay leedahay duuliye leh hal shirkad oo oggol in lacag lagu siiyo bogagga internetka ee qaawan qaarkood haddii lacag bixinta lagu sameeyo gudaha Mareykanka iyo kaarka amaahda macaamiisha Mareykanka.
Shirkadaha kale ee waaweyn ee kaararka amaahda, oo ay ku jiraan Visa iyo MasterCard, waxay u oggolaadaan labadaba kuwa kaarka amaahda iyo kuwa bixiya kaarka deynta inay ku iibsadaan waxyaabaha qaawan ee internetka.
E-mailka uu u diray BBC-da, afhayeen u hadlay Mastercard ayaa sheegay in "ay hadda baarayaan sheegashooyinka warqadda naloogu sheegay.
“Qaabka shabakadeena ay u shaqeyso ayaa ah in bangigu isku xirayo ganacsade iyo shabakadeena si uu u aqbalo bixinta kaararka.
“Haddii aan xaqiijinno ficil sharci darro ah ama ku tumashada xeerarkeenna (kuwa haysta kaararka), waxaan la shaqeyn doonnaa bangiga ganacsadaha si aan ula dhaqanno ama aan u joojino xiriirkooda shabakadeena.
"Tani waxay la jaanqaadaysaa sida aan horey ula soo shaqeynay hay'adaha sharci fulinta iyo kooxaha sida Xarumaha Qaranka iyo kuwa Caalamiga ah ee Caruurta La la'yahay iyo kuwa La Adeegsaday."
Tallaabooyinka qaarkood waxaa sameeyay shirkadaha lacag bixinta internetka si ay uga fogaadaan warshadaha qaawan.
Bishii Nofeembar 2019, Paypal, oo ah shirkadda caalamiga ah ee lacag bixinta ee internetka, ayaa ku dhawaaqday in aysan mar dambe taageeri doonin lacagaha la siinayo Pornhub maaddaama ay siyaasaddoodu mamnuucayso taageeridda "agabyada ama adeegyada qaarkood ee ku wajahan galmada".
Bogagga ay ku leeyihiin boggooda, Pornhub waxay ku yiraahdeen "way ku halaagsameen" go'aanka waxayna tallaabadu ka tagi doontaa kumayaal kumbuyuutar oo ah noocyada iyo filim sameeyayaasha kuwaas oo ku tiirsanaa ka-soo-bixinta adeegyada caymiska iyada oo aan lacag la siinin.
Riwaayad sixiroole ah oo sheekada la wadaagta Pornhub, oo weydiisatay inaan magaceeda la sheegin, ayaa sheegtay in qaboojinta lacag bixinta ay saameyn weyn ku yeelan doonto dakhligeeda.
"Si daacadnimo ah, waxay noqon doontaa dhabar jab," ayay tiri. Waxay tirtiri laheyd dakhligeyga oo dhan mana garanayo sida lacag loo helo, khaasatan hada qufulka.
Kaddib markii ay kordheen cadaadiska la xisaabtanka badan ee goobaha qaawan, Senator Ben Sasse oo ka tirsan Nebraska ayaa warqad u diray Waaxda Caddaaladda Mareykanka bishii Maarso isagoo ka codsaday Xeer-ilaaliyaha Guud William Barr inuu baaro Pornhub ee la sheegay inuu ku soo daayay falalka kufsiga iyo dhiig-miirashada.
Isla bishaas, sagaal baarlamaan oo ka tirsan xisbiyada badan ee reer Kanada ayaa warqad u qoray Raiisel wasaare Justin Trudeau iyagoo ku baaqaya in baaritaan lagu sameeyo MindGeek, oo ah shirkadda waalidiinta ee Pornhub, oo xarunteeda ku leh Montreal.
Xarunta Caalamiga ah ee Kahortaga Galmoodka, Boqortooyada Midowday,
Xarunta Qaranka ee Ka-faa'ideysiga Galmada, Mareykanka,
Qaylo-wadaha Qaylada, Australia
Shabakada Yurub ee Haweenka Soogalootiga ah, Beljamka
Ereyga Ayaa Sameeyay Jidh Bolivia, Bolivia
Caafimaadka Caafimaadka Caruurta iyo Dhalinta, Denmark
Apne Aap, Hindiya
U doodaha badbaadada, Irland
Shabakada Afrika ee Kahortaga iyo Kahortaga Xadgudubka Caruurta iyo Dayaca, Liberia
Aasaaska Abaal marinta, Scotland
Barnaamijka Carbinta Wiilasha, Uganda